Aung San Suu Kyi – We’ll Meet Tomorrow (14th Nov 12:00 pm) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aung San/Aung San Suu Kyi » Aung San Suu Kyi – We’ll Meet Tomorrow (14th Nov 12:00 pm)
Aung San Suu Kyi – We’ll Meet Tomorrow (14th Nov 12:00 pm)
Posted by kai on Nov 13, 2010 in Aung San/Aung San Suu Kyi, News |4comments
ခွင့်မတောင်းထားပါဘူး.။( တလက်စထဲ .. ခွင့်ပြုပါလို့ ခွင့်တောင်းပါတယ်..)
ယူအက်စ်က မီဒီယာတွေ ၊တီဗီတွေကယူအက်စ်မှာနေတဲ့ မြန်မာတွေရှာပြီး အင်တာဗျူးတာ၊ သတင်းမေးတာလုပ်လာရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အကြောင်း တိတိကျကျဖြေနိုင်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ် ကူးတင်ပါတယ်။
ဒါတွေကို အခြေခံပြီး ဖြေကြစေလိုတာပါပဲ..။ အချက်အလက်တွေမမှားရအောင်ပေါ့..။
စာထဲမှာ မှတ်ချက်သဘောထားတွေပါ ပါတာမို့ .. အဲဒါတွေပါ ဖတ်ကြစေလိုပါတယါ..။
လူထုဦးစိန်ဝင်းရဲ့ မှတ်ချက်ဟာ အင်မတန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်..။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က မနက်ဖြန်ကျမှ ဒီချုပ်ရုံးမှာ စပီကာနဲ့ စကားပြောမယ်ဆိုပါတယ်။်နိုဝင်ဘာလ ၁၄ ရက်နေ့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ရှိတဲ့ ရွှေဂုံတိုင် အဖွဲ့ချုပ်ရုံး နေ့လယ် ၁၂ နာရီဖြစ်ပါတယ်..။ပြောစ၇ာတွေလည်း အများကြီးရှိတယ်ဆိုပါတယ်..။အောက်မှာ ဒီနေ့ပြောစကားတင်ပေးထားပါတယ်..။
တွေ့ချင်သူတွေ သူဘာပြောတယ်ဆိုတာ နားထောင်ချင်သူတွေ အဲဒီသွားတွေ့နိုင်ကြောင်းပါ..။
” စကားပြောလို့ရအောင် အသံနည်းနည်းလေး တိတ်ပြီး နေပေးကြပါ။ တိတ်တိတ်လေး နေပေးကြမှ ပြောတာကို ကြားရမှာပေါ့။ တကယ်ပြောရမယ့် အချိန်ကျမှ အသံမထွက်ဘဲ မနေကြနဲ့။ နောက်က မကြားရင်လည်း ရှေ့ကလူတွေက နောက်က လူတွေကို ပြန်ပြောပြပေါ့။ အဲဒီလို တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်မျှတတဲ့ စိတ်ထားကြမှပေါ့။ ရှေ့ကလူတွေကလည်း နောက်က လူတွေကို ငဲ့ပြီး တိတ်တိတ်လေး နေမယ်။ အမလေး စစချင်း တကယ်ထဲကို နိုင်ငံရေးသင်ခန်းစာ ပေးနေရတာပဲ။ မတွေ့ရတာလည်း ကြာပြီ ဆိုတော့ ပြောစရာတွေက အများကြီးပဲ။ အခုက အသံချဲ့စက် မရှိလို့ မကြားရဘူး။ အားလုံး ကြားချင်ရင် မနက်ဖြန် ရုံးကိုလာခဲ့။ အသံချဲ့စက်နဲ့ ပြောမယ်”
၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် နိုဝင်ဘာလ ၁၃ ရက်နေ့ ညနေ ၅:၂၀ တွင် အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဧ။်သမီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် နေအိမ်အကျယ်ချုပ်မှ လွတ်မြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ၂၀၀၃ခုနှစ် မေလ (၃၀) ရက်နေ့ ဒီပဲယင်းဖြစ်စဉ်အပြီးမှစ၍ ထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပြီး ယခုလွတ်မြောက်ချိန်အထိ (၇) နှစ်နှင့် (၆) လကြာ ဆက်တိုက် ထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။ ၄င်းသည် ၁၉၈၈ ခုနှစ်အတွင်း ကျန်းမာရေးချို့တဲ့သော မိခင်အား ပြုစုရန် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လာခဲ့ပြီး မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေး လှုပ်ရှားမှုများတွင် ဦးဆောင်ပါဝင်ခဲသည်။ ယင်နောက်ပိုင်းမှစ၍ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်ကာလအတွင်း နေအိမ်အကျယ်ချုပ်များဖြင့် (၁၅) နှစ်ခန့် ထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် နောက်ဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ၂၀၀၉ ခုနှစ် မေလအတွင်းက အမေရိကန်နိုင်ငံသား ဂျွန်ရက်တော နေအိမ်ခြံဝင်းအတွင်း ရေကူးဝင်ရောက်ခဲ့မှုနှင့်ပတ်သက်၍ စွဲချက်တင် အရေးယူခြင်းခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါအမှုကြောင့် နေအိမ်အကျယ်ချုပ်သက်တမ်း ၁၈ လ ထပ်မံတိုးမြှင့် ချမှတ်ခံရခြင်းဖြစ်သည်။
အရမ်းဝမ်းသာတယ်ဗျာ ကျွန်တော်တို့ မျှော်လင့်ချက်ရှိလာပြီ။
ဒီနေ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်တာကို လာစောင့်ကြည့်ကြတာ လူတော်တော်များတယ် ညနေပိုင်းမှာ ပိုများတယ် အတားအဆီးတွေ ဖယ်လိုက်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အိမ်ခြံဝင်ထဲကို ပျော်ပြီးဝင်သွားကြတာ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း တစ်ခုလုံး လူသောင်းချီရှိတဲ့ လူပင်လယ်ကြီး ဖြစ်သွားတယ်။
အဲ့သည်မိန့် ခွန်းပြောပွဲကို နားထောင်ပြီးမှ နည်းနည်းမှန်းလို့ ရမယ်ထင်တယ်ဗျို့ 
သူနဲ့ ဆင်ဖြူရှင် ဘယ်လို အပေးယူရှိထားတယ်ဆိုတာ ကျူပ်တို့ မသိနိုင်သေးဘူးလေ
အဖွားကြီးကတော့ သမ္မတရူး ရူးနေတာမဟုတ်တဲ့အတွက် အာဏာမရရင်လဲဂရုက်မှာမဟုတ်ဘူး
သူကတော့ နိုင်ငံတွက်ဆို ကျရာနေရာက သယ်ပိုးမဲ့ ပုံရှိတယ်ဆိုတာ ထင်ရှားတယ် ဘာဖြစ်ဖြစ် ကျူပ်ကတော့
အဖွားကြီးကို အချူပ်အနှောင်တွေ ထပ်မရှိလာစေခြင်တော့ဘူး
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို လုံးဝမလွှတ်ပေးတာ ကတော့ လုံးဝမမှန်မကန်ရှိနေသေးတယ်ဆိုတာကို
လွယ်လွယ်လေးဆုံးဖြတ်လို့ ရတယ်နော် ကွဲထွက်သွားတဲ့ ပါတီဝင်အချို့ ကိုလည်း အပြစ်တင်လွန်းအားကြီးရင် မကောင်းဘူးလည်းထင်တယ် ဘာဖြစ်ဖြစ် မိန့် ခွန်းကို နားထောင်ပြီးရင် တော့ အခြေနေလေးတစ်ခုကို မှန်းဆလို့ရမှာ သေခြာတယ် ဒီအချိန်မှာ စာကြောင်းနည်းနည်းနဲ့အဓပ္ပါယ်များများရှိတဲ့ လက်ကမ်းစာစောင်အချို့ ဟာ တော်တော်အရေးပါတယ် လို့ဆိုနိုင်တယ် သတိလည်းထားကြ ဆင်တူရိုးမှား တွေထွက်လာနိုင်သေးတယ် အမေစုတို့အန်တီစု တို့အဲ့လိုသုံးနှုံးပြီး မလိမ့်တစ်ပတ်နဲ့ထောင်ခြောက်ထဲမောင်းသွင်းတဲ့ စာရွက်တွေလေ တတ်နိုင်ကြရင်တော့ လက်ကမ်းစာစောင် တစ်ချို့ ကို ကူးရေးပြီး တင်ပေးကြပါစေလိုကြောင်းနှင့် ကျူပ်တို့ ကတော့ မနူနိုင်ဘူးဟေ့ အဖွားကြီးဘဲ လို့ချစ်စနိုးလေးခေါ်လိုက်ပါတယ်။
သာမန်အားဖြင့်တော့ … ရွေးကောက်ပွဲပြီးရင်… လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အမိန့်ထုတ်ရတာပဲ..။
အဲဒါက .. မနက်ဖြန် အဖွားကြီးပြောမဲ့စကားပေါ်မူတည်ပြီး လုပ်မယ်ထင်တယ်…။
တကယ်လို့သာ… ဆင်ဖြူရှင်နဲ့အဖွားကြီးနဲ့အပေးအယူရှိတယ်ဆိုရင်တော့ .. ကောင်းတာပေါ့..။ အခုသတင်းအသွားအလာတွေအရသုံးသပ်ရင်ကို… တယောက်တယောက်… ၂ယောက်ထဲ … ထင်းထင်းကြီးရှိနေတာ သိသာလွန်းနေမင့်ဟာနော..။
ကြားထဲ.. ဒီညလောက်ဖြစ်ဖြစ် ..ဆင်ဖြူရှင်ကြီးကိုယ်တိုင် … အဖွားကြီးဆီ တိုက်ရိုက်ဖုံးဆက်လိုက်သင့်တယ်..။
အကြီးကမဆက်လည်း အငယ်က ဆက်လိုက်သင့်တယ်..။ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းလည်း ပြောရမှာပဲ..။ သူလက်မှတ်ထိုးလို့ လွတ်တာမဟုတ်လား.။ ဒါက နိုင်ငံရေးပဲ..။
ဟုတ်ပါတယ် ဦးစိန်ဝင်း ခင်ဗျာ
ကျတော်တို.ပြည်သူတွေအနေနဲ.ကလည်း နိုင်ငံရေးဆိုတာကိုနားလည်သဘောပေါက်ပြီး အားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ. အမျိုးသားနိုင်ငံရေးဆိုတာလေးကိုတော.လုပ်စေချင်တယ်ဗျာ………….
အင်း … သူလက်မှတ်ထိုးလို့ လွတ်လာတယ်ဆိုပေမယ့် မလွှတ်ပေးလို့မှမရတာ
ဒါဟာလည်း ရွေးကောက်ပွဲလို ကျားကွက်တစ်ကွက်ရွှေ့တာမဟုတ်ပါစေနဲ့လို့ပဲ ဆုတောင်းရမှာပဲ
ဘာအကြံဥာဏ်တွေရှိလည်းမှ မသိနိုင်တာ ….